Misoro: Pefiyumu, Pondiyo Pirato, Kufukidza Musoro | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Waray-Waray Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
Chii chingaitwa kuti tibatsire hama nehanzvadzi dzinokanganiswa utano nemapefiyumu?
Vamwe vanoti kana vakafema mweya wemapefiyumu vanotanga kurwara. Vanhu ivavo vari mudambudziko rakakura. Zuva nezuva vanosangana nevanhu vanoshandisa mapefiyumu uye havana zvavanogona kuita kuti vasasangana nevanhu ivavo. Asi, vamwe vakabvunza kuti zvingaita here kukumbira hama nehanzvadzi kuti dzisashandisa mapefiyumu padzinouya kumisangano yechiKristu nemagungano.
Chokwadi hapana muKristu angada kuita zvinhu zvinoita kuti vamwe vaomerwe nokupinda misangano yechiKristu. Tose tinoda kukurudzirwa nemisangano yedu. (VaH. 10:24, 25) Saka kana paine munhu anokanganiswa utano nokufema mweya wemapefiyumu zvokuti anenge ava kutadza kupinda misangano, anogona kutaura nyaya yacho nevakuru. Kunyange zvazvo zvisiri muMagwaro uye zvisina kukodzera kudzika mitemo panyaya yokushandisa mapefiyumu, vakuru vanogona kutaura nyaya yacho kuungano kuti izive dambudziko riri kusangana nevamwe. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, vakuru vanogona kufunga nezvemashoko akabudiswa nesangano panyaya iyi, voakurukura paMusangano Webasa, pachikamu chezvomuungano yenyu kana kuti vanogona kusarudza kupa chiziviso nenzira isingagumburi ungano. * Kunyange zvakadaro, vakuru havafaniri kugara vachipa zviziviso zverudzi urwu. Pamisangano yedu panogara pachiuya vanhu vanofarira nevamwewo vaenzi vasingazivi nezvedambudziko iri saka tinoda kuti vanhu ivavo vanzwe vakasununguka. Hatifaniri kuita kuti vaya vanoshandisa mapefiyumu avo zvine mwero vanzwe sokuti vanofanira kurega kuashandisa.
Kana muImba yoUmambo mukava nevanhu vanokanganiswa nemapefiyumu, vakuru vanogona kuronga kuti vanhu vakadaro vagare pavo voga pavasingakanganiswi. Somuenzaniso, vanogona kuteerera misangano vakagara mune rimwe kamuri. Kana izvi zvikaramba kushanda, ungano inogona kurekodhera misangano vanhu vakadaro kana kuti inogona kuita kuti vateerere misangano pafoni vari kumba kwavo, sezvinoitirwa vaya vasingakwanisi kubva pamba kuti vanopinda misangano.
Mumakore achangopfuura, Ushumiri Hwedu hwoUmambo hwanga huchikurudzira hama nehanzvadzi kuti dzifungewo vamwe padzinenge dzichipinda magungano emunharaunda. Sezvo mamwe magungano achiitirwa muzvivako zvakavharika, vanhu vaikumbirwa kuti vasanyanya kushandisa mapefiyumu akasimba pavanopinda magungano iwayo. Tinonyanya kukurudzirwa kufunga vamwe patinopinda magungano emunharaunda, nokuti kazhinji kacho zvinenge zvisingaiti kuti vaya vanokanganiswa nemapefiyumu vawanirwe nzvimbo dzavanogara vari voga. Zvisinei, mirayiridzo iyoyo haifaniri kutorwa semitemo inofanira kushandiswa pamisangano yeungano.
Sezvo tichirarama munyika ino yakaipa, tose tinosangana nematambudziko akakonzerwa nechivi chaAdhamu. Tinoonga chaizvo zvose zvinoedza kuitwa nevamwe kuti tisanyanya kutambura! Hazvisi nyore kurega kushandisa mapefiyumu kuitira kuti imwe hama kana kuti hanzvadzi ikwanise kupinda misangano yechiKristu. Asi kana tichida hama dzedu, tichasarudza kuita izvozvo.
Mabhuku enyika anotsigira kuti Pondiyo Pirato akamborarama panyika here?
Dombo rakanyorwa zita raPirato muchiLatin
Pondiyo Pirato anozivikanwa nevanhu vakawanda vanoverenga Bhaibheri nemhaka yezvaakaita pakatongwa uye pakaurayiwa Jesu. (Mat. 27:1, 2, 24-26) Asi zita rake rinowanikawo kakawanda mumabhuku enhoroondo dzekare. Bhuku rinonzi The Anchor Bible Dictionary rinoti zvinyorwa zvinotaura nezvaPirato “zvakawanda chaizvo kupfuura zvemamwe magavhuna eRoma aiva muJudhiya.”
Zita raPirato rinowanikwa kakawanda chaizvo mumabhuku enhoroondo dzechiJudha akanyorwa naJosephus uyo akanyora nezvezviitiko zvitatu zvinoratidza matambudziko akasangana naPirato paaitonga Judhiya. Munyori wenhoroondo dzechiJudha ainzi Philo akataura chechina chacho. Munyori wechiRoma anonzi Tacitus uyo akanyora nezvenhoroondo yemadzimambo eRoma, akatsigira pfungwa yokuti Pondiyo Pirato ndiye akapa murayiro wokuti Jesu aurayiwe panguva yaitonga Tibheriyo.
Muna 1961, vaichera matongo muimba yaiitirwa mitambo yeRoma muKesariya vakawana dombo raiva rakanyorwa zvakajeka zita raPirato muchiLatin. Chidimbu chedombo chiri pano chine mashoko asipo uye zvinofungidzirwa kuti dombo racho rizere raiva rakanyorwa kuti: “Kuna vanamwari vanokudzwa, Tibheriyamu (iyi) yakatsaurirwa naPondiyo Pirato, Mutariri weJudhiya.” Zvinoita sokuti chivako chaitaurwa itemberi yaikudza mambo weRoma Tibheriyo.
Muparidzi woUmambo wechikadzi anofanira kufukidza musoro here kana achiitisa chidzidzo cheBhaibheri paine muparidzi wechirume?
MuNharireyomurindi yaJuly 15, 2002 pachikamu chinoti “Mibvunzo Inobva Kuvaverengi,” paiva nenyaya yaitaura kuti hanzvadzi inofanira kufukidza musoro wayo painenge ichiitisa chidzidzo cheBhaibheri kana paine muparidzi wechirume, angava akabhabhatidzwa kana kuti asina. Asi patakaongororazve nyaya iyi takaona kuti pane zvinofanira kugadziriswa.
Kana hanzvadzi ichiitisa chidzidzo cheBhaibheri paine muparidzi wechirume akabhabhatidzwa, hanzvadzi yacho inofanira kunge yakafukidza musoro. Izvi zvinoratidza kuti inoremekedza urongwa hwaJehovha hwomuungano yechiKristu hwokuti murume ndiye musoro nokuti basa rokudzidzisa rainenge ichiita rinowanzoitwa nehama. (1 VaK. 11:5, 6, 10) Asi hanzvadzi iyi inogonawo kukumbira hama yacho kuitisa chidzidzo chacho kana ichikwanisa.
Asiwo kana hanzvadzi ichiitisa chidzidzo cheBhaibheri paine muparidzi wechirume asina kubhabhatidzwa uye asiri murume wake, Magwaro haarambidzi kuti iitise chidzidzo cheBhaibheri isina kufukidza musoro. Kunyange zvakadaro, dzimwe hanzvadzi dzinganzwa hadzo dzichida kufukidza musoro.
^ ndima 2 Mamwe mashoko akabudiswa nesangano panyaya iyi ari muMukai! yaAugust 8, 2000 munyaya inoti “Kubatsira Vaya Vane MCS,” iri pamapeji 24-26.
Mibvunzo Inobva Kuvaverengi—February 2015